Kaalmada ijaarka - InfoFinland
Nolosha Finland > Deganaanshaha > Kaalmada ijaarka
Haddii uu yar yahay dakhliga ku soo gala islamarkaasna aad Finland u deggan tahay si rasmi ah, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay kaalmada ijaarka ee Kelada. Waxaa taageero u codsan kartaa kirada, kharashka shirkadda saamiga iyo weliba kharashaadka biyaha iyo kululayska.
Deganaansho joogto ah waxaa loola jeedaa, in aad Finland ku leedahay guri rasmi ah inta badanna aad Finland joogto. Si aad u hesho kaalmada ijaarka, waa in aad sidoo kale xaq u leedahay kaalmooyinka Kelada.
Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ammaanka bulsho ee Finland.
Kaalmada ijaarka ee Keladu waa:
kaalmada guud ee ijaarka
kaalamada ijaarka ee dadka qaata lacagta hawlgabka
caawinaadda ijaarka ee askarta tababarka ku jirta la siiyo iyo qofka adeegga bulshada ku jira
Inta badan waxaad markiiba heli kartaa hal nooc oo caawimaadda ijaarka ah
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale xaq u leedahay taageerooyinka kale ee Kelada. Haddii dhammaan dakhliga ku soo gala iyo hantidaada iyo taageerooyinka lagu siiyay aanay ku filnayn kharashaadka kaa baxa, waxaad Kelada ka codsan kartaa lacagta kaalmada nolosha.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan lacagta kaalmada nolosha ka aqri bogga InfoFinland Dhibaatooyinka dhaqaale.
Kaalmooyinka degistaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Kaalmada waxaa la siin karaa hal qof ama qoys ahaan (ruokakunta). Dadka sida joogtada ah wadajir ugu wada nool isku guri waxay iskula jiraan koox isku cunto ah. Dadka si rasmi ah guriga u wada degen waxaa loo xisaaba sida qoys. Caadi ahan qoys wuxuu ka kooban yahay labo qofood oo is qaba, lammaano isla degan ama qoys. Sidoo kale hal qof kaliya waxuu heli karaa kaalmada sida qoyska. Waxaa kaalmada guud ee ijaarka qoys loo siiyaa si wada jir ah, ayadoo la cuskanayo hal codsi.
Ku xisaabtan, in haddii aad isku guri deggan tihiin qof aad saaxiib tihiin islamarkaasna aad haysataan heshiiska guriga oo wadajir ah, waxaa markaas la idiin arkayaa in aad isku dheri tihiin. Haddii aad qof wada deggan tihiin hal cinwaan, labadiina aad kala haysataan heshiis kiro oo kala duwan, waa in aad codsiga ku caddaysaa haddii uu xiriir is-qabid ah idinka dhexeeyo iyo in kale. Waxaad sidoo kale sidaas samaysaa marka aad ku jirto heshiis ka sii kireysashada guri qof isagu kireystay.
Kaalmada guud ee ijaarka waxaa heli kara:
qoysaska carruurta leh
dadka is-qaba iyo kuwa loo diiwaangeliyey xiriirka wada noolaanshada
labada isla degen laakiin aan weli is-qabin
qofka kaligi nool ama
dadka wada jirka u wadanool sida dhallinyarada saaxiibada ah
Kharash guriyeyn noocee ah ayaa la aqbalayaa?
Taakulaynta ijaarka waxa lagu bixin karaa guri joogto ah oo Finland ku yaalla. Sharciga ayaa qoondaynaya lacagto loo aqbali karo in ay ku baxayso kirada marka taakulaynta la xisaabinayo. Gurigu wuxuu ahaan karaa:
guri ijaar ah
Waxaad caawimaad u heli kartaa tusaale ahaan ijaarka, kharashka shirkadda saamiga iyo weliba kharashaadka biyaha iyo kululayska. Waxaa kale oo lagu xisaabtamayaa qayb kamid ah dulsaarka deynta guriga.
Kaalmada ijaarka waxaa lagu bixiyaa kharashaadka degaanka ee macquulka ah. Magaalooyinka waa weyn waxaa la ogol yahay in kharashka degaanku uu ka sareeya kan magaalooyinka yar-yar.
Keladu bixin mayso dhammaan kharashaadka degaanka
Qayb ka mida kharashka degaanka waa inaad adiguu bixisaa. Sidaa darteed ayaa la cadaddayaa qeybta aad bixineyso. Inta aad adigu bixineysana waxay ku xiran tahay:
tirada inta khaangaarkaiyo carruurta ku nool guriga
wadarta guud ee dakhliga dadka guriga ku nool (dakhliga ka hor inta aadan canshuuraha la bixin)
Haddii dakhligu uu aad u yar yahay, markaas ma jirto qayb qofku ay tahay inuu bixiyo.
Marka la xisaabinayo kaalmada ijaarka, waxaa laguu xisaabineyn 300 yuuro oo aan mushaarkaada bishii lagu xisaabinayn. Cadaddaasna ma ahan mid saameyn ku yeelaneysa inta aad kaalmo ijaar ku heli laheyd. Tan waxaa loo yaqaan ka dhimista mushaarka (ansiotulovähennys). Ka dhimista mushaarka waxaa loo sameynayaa qof walba oo ku nool guriga.
Kharashaadka ku baxa deegaanku waxay leeyihiin xad ugu sarreeya, yacni cadadda lacageed ee ugu badan ee kharashaadka deegaanka, kaas oo ay ku salaysan tahay taageerada ijaarka ee aad heli karto. Cadaddan lacageed waxaa loogu yeeraa kharashaadka deegaanka ee ugu badan (enimmäisasumismenot). Waxaa kharashaadkaas saamayn ku leh:
degmada uu gurigu ku yaal
tirada dadka qaangaarka ah iyo carruurta ee guriga ku nool
Haddii gurigu uu ka qaalisan yahay sida waa faqsan sharciga guud ahaan kaalmada ijaarka, qeybtaa siyaadeysa ee kharashka ku baxaya guriga, taasoo loo baahan yahay inaad adigu iska bixiso.
Kaalmada guud ee ijaarka gurigu waxay 80% ka tahay kharashaadka la oggol yahay ee deegaanka ku baxa, marka laga jarayo qaybta ay tahay in uu qofku iska bixiyo. Haddii ay deegaanka guriga kaaga baxdo lacag ka yar kharashaadka loo oggol yahay deegaanka, caddada kaalmada waxaa loo xisaabinayaa qaab waafaqsan kharashaadka rasmi ahaan u baxay.
Wixii is-bedel ah la socodsii xafiiska Kelada
Haddii dakhligaaga, xaalada degaankaaga, xaalada qoyskaaga ama xaaladaada wax iska bedelaan, si dhaqso ah u la socodsii isbedelka dhacay xafiiska Kelada. Go’aanka Kelada waxaa si cad loogu sheegay, arrimaha ay tahay inaad is-bedelkooda la socodsiiso Kelada.
Kaalmada degista ee guudFinnish | Iswidish | Ingiriis
Waa maxey iskudheriFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dalbashda kaalmada ijaarka
Kaalmada ijaarka guud waxaa laga codsadaa Kelada ayadoo la isticmaalayo foomka dalabka kaalmada ijaarka (AT1). Waxaad kirada kaalmada ku codsan kartaa xitaa shabakadda.
Foomka dalabka waa in lagu lifaaqaa:
koobiga heshiiska ijaarka, iyo cadayn inta uu la'eg yahay ijaarku (guriga kirada ah)
cadeyn caddadka lacagta daryeelka guriga iyo lacagta deynta guriga (guriga la leeyahay)
haddii aad dad kale wada nooshihiin, waxaa damaanada dadka kale oo qoraal ah, laguna cadaynayo inaad wakiil uga tahay dalabka kaalmada ijaarka
Codsiga u dir xafiiska Kelada ama adigu ka sameyso codsiga shabakadda. Keladu waxay macaamiisheeda ugu adeegtaa, xafiisyada, telefoonada iyo boostada iyo weliba ayadoo la adeegsanayo bogga adeega Internetka. Markii aad xaafiiska Kelada ka fushanaysid arimaha adiga kuu khaaska ah, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato warqadahaaga aqoonsiga, ama tusaale ahaan baasaboor.
Dalbashda kaalmada ijaarkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 24.01.2022 Boggan war-celin ka soo dir